uphando: uMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	28 Januwari 2020	• 3 Comments
Phambi kwakho kukho ingxelo ethi “Amanyathelo okunyusa izinga lokugonywa eNetherlands. Ukuphononongwa. ”Le ngxelo yabhalwa ngabaphengululi baseNivel naseAmsterdam UMC, eyayilungiselelwe nguMphathiswa Wezempilo, wezeNtlalontle kunye neMidlalo. Le yindlela eqala ngayo ingxelo, eza kwiiveki ezimbalwa ngaphambi kokuqhambuka kwentsholongwane. Kumanqaku am angaphambili ndakhankanya […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	3 Aprili 2019	• 16 Comments
Ngenxa yokuba kubonakala ngathi i-Anne Faber ityala liyingxaki, ukuphendula, isisombululo, i-PsyOp (ukusebenza kwengqondo) okumele kuqinisekiswe ukuba wonke umntu unokuhlolisiswa ngengqondo ngaphandle kwemvume kwaye inokufumaneka kwi-state, sifuna ukuba Iipolitiki nazo kufuneka zenze lo uphando. Funda yonke ifayile [...]
Ngubani onomloli e-NFI? "Ucinga ngoAnas, uRomy & Savannah, u-Anne Faber .."
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	13 Julayi 2018	• 2 Comments
Ngomso i-Telegraaf ehambelana nesihloko esithi 'Uphando olwenziwe kakubi kwi-NFI' ukuze litshintshise le nto ibe yicatshulwa elincinci 'i-NFI ngokwayo phantsi kokuhlolisisa'. Ngubani onokuyenza? Ingaba nguPeter Goot owaziwayo ngenxa yecala likaAnass Aouragh eWassenaar e2013? Okuqinisekileyo, kuba [...]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	7 Matshi 2018	• 32 Comments
Ukususela ekuphandeni kwesi siza, kukho ubungqina obukhuni bokuthi i-NOS kunye namapolisa banokuguqula naluphi na uhlobo lobungqina omnye komnye. Oku kusebenza kokubili umfanekiso kunye nobungqina obuvakalayo nobungqina be-DNA. Funda eli nqaku ngokucokisekileyo ukuhlalutya ubungqina obusekelweyo. Isibonakaliso sokuba yeyiphi amathuba [...]
Inkohliso yokusabalalisa ukubhaliswa kwesini
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	6 Agasti 2017	• 45 Comments
'M / V'. Indoda okanye umfazi. Ukwahlukana kubuya kwiindawo ezininzi kangangokuba akunakwenzeka. Kupaspoti yakho, kwikhadi lakho lesazisi, kwiileta ezivela kurhulumente. Nangona xa uqokelela inkunkuma eninzi, ngamanye amaxesha kufuneka ugcwalise ukuba ngaba uyindoda okanye umfazi. Oku kubonakala kubantu abaninzi. Iqela elihle [...]
Uphuhliso olubaluleke kakhulu eRomy Nieuwburg nase Savannah Dekker ishishini!
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO, ROMY & SAVANNAH CASE	by UMartin Vrijland	23 Julayi 2017	• 12 Comments
Ubuqhetseba kukutsala ingqalelo njengeendaba kwizinto xa ufuna kwaye ukuguqula ingqalelo xa ufuna. Ngokomzekelo, amazwe amaninzi akwazi ukuvelisa umdlalo we Pokémon Yiya ngokudibanisa kwengozi, ngoko akuzange kuqaphele ukuba ukuthengisa okuhlawulelwayo kakuhle [...]
Isibhengezo malunga negosa lamapolisa lendawo kwingingqi yaseRomy nase-Savannah
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO, ROMY & SAVANNAH CASE	by UMartin Vrijland	15 Julayi 2017	• 8 Comments
Nangona amapolisa kunye eendaba ukunika ngokwenene yabo intle Romy kunye Savannah iimpendulo ngokucacileyo Romy kunye Savannah mbandela yaye ingakumbi bacinge ukuba izinto bayafana ingasombululwa, oku ngokupheleleyo akunjalo. Inkwenkwe eyayiza kubulala uRomy Nieuwburg yaziwa ngamajelo kwaye [...]
Umvoti ohambayo: i-73% ihamba, i-16% ayinayo ingcamango yokuvota
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	9 Matshi 2017	• 4 Comments
Nieuwsuur ingxelo ebusuku ukuba uviwo lwe I & O Research (into eyahlukileyo lukaGallup) ibonisa ukuba 73% labavoti nangoku lundanda kwaye 16% akazange azi ukuba bavote ngoMatshi 15. Kucacile ukuba, abo bavotayo nabangabalulekanga bafuna uncedo oluncinci kumaphephandaba; ubutyebi obubutyebi. [...]
Iingcamango zobuqhetseba zingenasiphelo kwaye ziyakhulelwa kuwo wonke umcimbi omkhulu
Kufakwe kuyo UKUPHATHWA KWEZINDABA NEMFUMO	by UMartin Vrijland	27 Juni 2016	• 24 Comments
Ukuba ukhe ulilibale kakade: Iingcamango zobuqhetseba ziyintsipho kwaye zicingelwa kuwo wonke umcimbi omkhulu. Zivela kwingcamango yabantu abanengxaki yengqondo okanye 'ukuchasana nokuziphatha okubi'. Ngokukhawuleza xa usongela ukuba uhlale ucinga ngokucinga ngeziganeko, unokuphela kuphela kule nqanaba. [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 101.605
Ilanga op Inkqubo yesizwe yokuthintela: "fumana uvavanyo lweeveki ezingama-22!" .. umntwana wakho uya kwenziwa i-hermaphrodite
UMartin Vrijland op Ngaba i-IVF kunye nogonyo zikhokelela kwizizukulwana zabantwana abathandanayo?
Ikhamera 2 op Ukwenza njani ukugxekwa komgaqo-nkqubo wombuso? Spin ibali "loMyili weRypke Sail"